बसकाे छतमा सामान निकाल्न गएका सहचालककाे करेन्ट लागेर लागेर गयो ज्या’न! (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > बसकाे छतमा सामान निकाल्न गएका सहचालककाे करेन्ट लागेर लागेर गयो ज्या’न! (भिडियो हेर्नुस)
admin December 26, 2020 December 26, 2020 समाचार	0
सल्यानमा बसकाे छतबाट सामान निकाल्दै गरेका गाडी सह-चालककाे करेन्ट लागेर मृ त्यु भएकाे छ ।
दाङ तुलसीपुरबाट सल्यानकाे छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ दहखाेला जाँदै गरेकाे ना ८ ख २९६२ नम्बरकाे रोकि राखेको बसकाे छतबाट यात्रुकाे सामान निकाल्दै गर्दा विद्युतकाे करेन्ट लागेर साेहि बसका सह-चालककाे घटनास्थलमै मृ त्यु भएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएकाे छ ।
मृ त्यु हुने सह-चालक दाङ डंगेश्वर गाउँपालिका निवासी २१ वर्षीय हिमेन्त डाँगी भएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । घटना शुक्रबार साँझ ५ बजे छत्रेश्वरी गाउँपालिका ५ लेखपाेखरा बागबजारमा भएकाे हाे ।
थ्रिफेज विद्युत लाइनलाइ सडकमै गाडीले छुनेगरी तार तानेकाे हुँदा घ’टना भएकाे स्थानीयले बताएका छन् । अहिले प्रहरी घ’टना स्थलमा पुगेर अ’नुसन्धान गर्दैछ भने गन्तव्यमा हिडेका यात्रुहरु अलपत्र परेका छन् । **भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहाेस्***